Burma Partnership » သမ္မတ၏ ဘက်တော်သားများသာ ဖြစ်ကြသည် (All the President’s Men)
By Burma Partnership and Equality Myanmar • September 25, 2014
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် (MNHRC) ဖွဲ့စည်းခြင်းဥပဒေကို ယမန်နှစ်က ချမှတ်လိုက်သဖြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှအစပြုမည့် ယင်း၏အခွင့်အာဏာကို အခိုင်အခန့် ထူထောင်ပေးလိုက်တော့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိအခြေအနေအရ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် မည်သည့်စနစ်ကိုမဆို အမှန်တကယ် လိုအပ်နေသည်။ မြန်မာစစ်တပ်မှ မတရားမှုများ ဆက်လက်ကျူးလွန်နေခြင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ပတ်သက်နေသည့် များစွာသော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ အထူးသဖြင့် မြေယာသိမ်းပိုက်မှုများ၊ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော် ပြောဆိုခွင့်နှင့် သင်းပင်းဖွဲ့စည်းခွင့်အပေါ် ကန့်သတ်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီး လက်ရှိအရေးတကြီး ဖြေရှင်းရမည့်ကိစ္စမှာ မွတ်စလင်ဆန့် ကျင်ရေး ရေးသားပြောဆိုမှုများ၊ ဘာသာရေး နှိပ်ကွပ်မှုများနှင့် အကြမ်းဖက်မှုများ ဆက်လက် ကြီးထွားနေခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။
အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံကို ဤနေရာတွင် ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါသည်။
In the last year, the Myanmar National Human Rights Commission enabling law was passed, finally institutionalizing its mandate that will begin in 2015. The human rights situation in Burma certainly needs any instrument possible, with continuing abuses by the Burma Army, violations related to business investment rampant, particularly land confiscation, curtailment of freedom of expression and association, and perhaps most pressing, the continuing rise of anti-Muslim rhetoric, persecution, and violence.
Tags: Burma Partnership, Equality Myanmar, MNHRC Reports, Rohingya